Chii chinonzi somatization uye chinokanganisa sei mamiriro ekuisa wega? | Bezzia
Chii chinonzi somatization uye chinokanganisa sei mamiriro ekuisa wega?
Pau Heidemeyer | | Welfare, Zvirwere, Utano
Somatization ndeye kusagadzikana kwepfungwa kunoshandisirwa kune vanhu vanoramba vachirwara nezviratidzo zvakasiyana pasina kwazviri kuwanikwa.
Ichi hapana mubvunzo chiitiko chezvepfungwa chinomutsa kuda kuziva.
Zvichipa mamiriro azvino, uko kutya kwehutachiona kuri patent uye kwakapararira, hazvisi zvisina musoro kufunga kuti kuchave nevanhu vanogona kugadziridza zviratidzo zvavo.
Vanhu vane rudzi urwu rwechirwere, vasingazivi, vanoshandura kutya, uye nekudaro kwepfungwa, mukunzwa imwe kana akawanda zviratidzo zvemuviri zvechirwere.
Kwemamwe makore ikozvino, iyo hukama hwepedyo pakati pepfungwa nemuviri, uye icho pasina kupokana chikamu chakakosha kwazvo cheizvi uye zvimwe zvakawanda zvinetso.
Somatization inoenda yakabatanidzwa mune dzakawanda zviitiko kune zvekushushikana kwakanyanya, kushushikana zvachose kana kutya pamberi pechirwere chimwe kana akati wandei.
Dzimwe nguva kugadziriswa Iyo inowanzo kuvhiringidzika ne hypochondria, asi sezvatichaona pazasi, kunyangwe ivo vachitanga kubva kune imwecheteyo mhando yekusagadzikana, ivo zvinhu zviviri zvakasiyana.
Mishonga yekurapa kudzora kushushikana
Zviitiko zvinokurudzira kushushikana, kushushikana uye kushushikana
Isu tinotaura nezve zvinonhuwira zvinorumbidzwa nesainzi
1 Mukati mekusarongeka kwesomatic tinogona kuwana mhando dzakasiyana:
1.2 Matambudziko eSomatization
1.3 Dissociative kusagadzikana
1.4 Somatic inoshanda syndromes
1.5 Comorbidity neyechirwere chepfungwa
2 Kugadziriswa kwemumwe kunowanikwa sei?
3 Ngatitaurei zvino nezve somatization uye coronavirus mune zvakadzama
3.1 Chii chinoitika zvino nevanhu vanoomesa hutachiona uhu?
Mukati mekusarongeka kwesomatic tinogona kuwana mhando dzakasiyana:
Ndiyo iyo inopa munhu kunetseka zvakanyanya uye kutya kubatira chero chirwere chakakomba, kwete zvakanyanya kune izvo zviratidzo ivo pachavo. Izvi zvinoita kuti mwero wekushushikana uve wakanyanya, nekuti munhu wacho anowanzo kuvhunduka nekukurumidza. Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti hypochondria ndeyekuti haiwanzoda chinhu chekunze kumutsa kutya ikoko, senge mamiriro azvino necoronavirus, asi vanhu vanotambura ne hypochondria vanowanzo kuunza iyi mamiriro ekunetseka uye kutya nguva dzose.
Rudzi rwekusagadzikana runowanzotanga munhu asati asvitsa makore makumi matatu. Munhu anowanzo kunzwa rudo munhengo dzakasiyana, kwete zvakanyanya chirwere pachacho chinomunetsa, asi kusagadzikana kunobva kune izvo izvo kwaanonzwa nenzira yemuviri.
Mune rudzi urwu rwekusagadzikana, murwere anoti ane zviratidzo zvekukanganisa mota.
Somatic inoshanda syndromes
Dambudziko iri rinopa mamiriro ane chekuita nezvepfungwa pamwe nepanyama. Vanhu vanogona kusangana nekusingaperi kuneta kana kushatirwa ura syndrome, semuenzaniso.
Comorbidity neyechirwere chepfungwa
Pakati pevarwere ava, zviratidzo zvakaita sekushushikana uye kushushikana zvakajairika mukuwedzera pakuratidza zviratidzo zvemuviri.
Kugadziriswa kwemumwe kunowanikwa sei?
Nguva dzose kuongororwa kwezvirwere zvekurapa kwemuviri kunofanirwa kuiswa kunzeMushure mekuongororwa kwakakwana kwekiriniki iyo inorambidza kunze kwechirwere chemuviri, zvinogona kugadziriswa kunofanirwa kutariswa.
Vanhu vane aya marudzi ezvinetso vanowanzove neakanyanya mamiriro ekuzvidya mwoyo, kushushikana uye kutya. Vazhinji varwere vanoti ivo vanounganidza yakawanda ruzivo nezve chirwere icho chinovashungurudza uye kuvanetsa.
Kazhinji, vanhu vane matambudziko aya vanoomesa kupfuura chiratidzo chimwe chechirwere ichocho izvo zvinovashungurudza, zvichikanganisa hupenyu hwavo hwezuva nezuva uye nekuwedzera kuzvidya moyo.
Ndosaka zvichikosha, uye zvakanyanya mumamiriro ezvinhu senge aripo neiyo coronavirus, kuchengetedza kutya, kushushikana uye kunetseka zviripo. Uye ziva kuti, Munguva dzekutambudzika nekutya, zvakajairika kuti ukwanise kunzwa chimwe kana zvimwe zviratidzo zvechirwere pasina kutambura nazvo. Kana tikatarisa izvi, tinogona kuongorora zviri nani kuti chii chingatirwadzisa kana kuti kwete tobvunza chiremba kuti ationgorore.
Matambudziko epfungwa anowanzoitika zvakanyanya kupfuura zvatinofunga. Zvakaitika kwatiri tese pane dzimwe nguva kuti tiri mumunda, tinoona tsikidzi kana mumwe munhu akarumwa nehumhutu uye tinonzwa kuvaviwa mumuviri wedu pasina chikonzero.
Kugona kuzvidzora-kugadzirisa manzwiro edu kwakakosha kuchengetedza hutano hwedu hwepfungwa munguva yedambudziko.
Zvemumoyo kuzvidzora-nguva munguva dzakaoma senge zvazvino neiyo coronavirus kupatsanurwa
Maitiro ekudzivirira kusagadzikana kunokonzerwa nekusungwa
Kurara uye kuisa wega wega kuti uwane kurara zvirinani?
Ngatitaurei zvino nezve somatization uye coronavirus mune zvakadzama
Imwe mhuri yemavhairasi inonzi coronavirus, Dambudziko razvino nderekusava nechokwadi kuti inogadzira nekuve uchiri kungodzidzwa nekuregeredza chikamu cheayo maficha. Kunyangwe ichifanira kucherechedzwa kuti mushonga uri kuwedzera zvakanyanya mune izvi.
Zvisinei, kusava nechokwadi uku, kutya kutapukirwa, kuti hapana mushonga wekudzivirira, nezvimwe. Zvinoita kuti vanhu vazhinji vanzwe vasina kuchengeteka, vachizvidya mwoyo uye vachitya hutachiona.
Pamusoro pezvo, zviratidzo zveyi coronavirus zvakanyatsojeka uye zvakaziviswa kwazvo munhau. Hutachiona hutachiona hunowanzo kuperekedzwa nekuneta, kurwadziwa kwemhasuru, uye kunyange zvimwe zvinhu zvakaita sematambudziko neganda kana nepfungwa dzekuravira nekunhuwidza.
Chii chinoitika zvino nevanhu vanoomesa hutachiona uhu?
Isu tese tine ruzivo rwakakwana pamusoro pezviratidzo zvehutachiona uye nekutya kuri ipapo yakapararira mupasi rose. Izvi ndiyo nzvimbo yakakwana yekuberekera vanhu vazhinji kune somatic zviratidzo izvi pasina kutapukirwa chaiko. Iwe unogona kunzwa kutemwa nemusoro, kuva nechikosoro, kunzwa kunetseka kufema uye isu tinokwanisa kunyange kukwidza muviri wedu tembiricha zvishoma zvegumi tisingazivi.
Ramba uchifunga kuti vanhu vakatotambura nedambudziko iri pasati padambudziko rezvekurapa vangangoita hutachiona. Nekudaro, vanhu vasina kutambura nezvinetso izvi asi vari kuenda panguva yekushushikana, kushushikana uye kutya hutachiona, vanogona kutambura nezviratidzo. Vanogona kukosora kamwechete uye pfungwa dzavo dzatotanga kufunga kuti vanogona kutapukirwa uye izvi zvinoita kuti kukosora kuwande pamwe nekutya. Izvi zvinoita kuti tipinde mudenderedzwa rine hukasha, pandinonyanya kukosora ndipo pandinonyanya kushushikana uye ndikanyanya kukosora.
Zvakakosha kuramba wakadzikama, kuongorora mamiriro acho ezvinhu uye kuonana nachiremba kana tichiona kuti tiri kuwedzera kuipa kana kuti takave munzvimbo inokwanisika kutapukirwa. Asi isu tinofanirwa kugara tichifunga kuti kutya uye kuzvidya mwoyo zvinogona kutiitise isu kutambura uye kuramba takadzikama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Utano » Chii chinonzi somatization uye chinokanganisa sei mamiriro ekuisa wega?
Zvese izvo oatmeal zvinogona kuita kune hutano hwako
Akanakisa akateedzana iwe aunowana pane Disney +